रिलिज भयो ‘पासवर्ड’, सन्नीको आइटमले तान्ला दर्शक ? « रंग खबर
रिलिज भयो ‘पासवर्ड’, सन्नीको आइटमले तान्ला दर्शक ?
रंगखबर, काठमाडौँ – शुक्रबारदेखि क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘पासवर्ड’ अलनेपाल रिलिज भएको छ । सम्राट बस्नेत निर्देशित फिल्ममा अनुपविक्रम शाही, विक्रम जोशी, सन्नी लियोनी, बुद्दि तामाङ, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, धिरेन शाक्य, लिजा सुनार, परि राना, छुल्ठिम गुरुङ, एभरेस्ट सुर्य बोहरालगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
फिल्ममा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीको एक आइटम नृत्य छ । विहिबार राजधानीमा आयोजित प्रिमियरमा सहभागिता जनाउन सन्नी नेपाल आएकी थिइन् । ३०मिनेट प्रिमियरमा मिडिया र दर्शकसँग साक्षात्कार गरेकी सन्नीले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेकी थिइन् ।
रिलिज अगाडीको प्रचार-प्रसारमा पनि सन्नीलाई निर्माण पक्षले मुख्य मेरुदण्ड बनाएको थियो । सन्नीको आगाडी फिल्मका अन्य कलाकारसमेत छायाँमा पारिएको थियो । अब हेर्न बाँकी छ, सन्नीको आइटम हेर्न कति दर्शक हल आइरिने छन् ?
अमित बस्नेत र हिराल जोशीले निर्माण गरेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता अंकित गौतम हुन् । फिल्मको ओपनिङ डेको विहानी अकुपेन्सी कमजोर देखिएको छ । आइतबारसम्मको व्यापारले फिल्मको लाइफटाइम कलेक्सनको अनुमान गर्न मद्दत पुग्नेछ । नेपाल पक्षले बताए अनुसार फिल्म महँगो बजेटमा निर्माण गरिएको छ ।